Fira - Aug 29, 2016
Fiigicha fageenya km 9 IAAF Cross Country Atapuerca'tti, Ispeen, geggeeffame atleet Imaanaa Margaa daqiiqaa 25:02 galuudhaan injifate. Imaanaa Margaa dirree Atapuerca irratti wolmorkii kana kan...
Alamuu Gammachuu maaraatoonii magaalaa Dabliin, Aayerlaand, itti geggeeffameen morkattoota isaa hunda irratti ol’aantummaa boonsaa argate. Alamuun maaraatoonii Dabliin sa’aa 2:14:01 xumuruudhaan abbaa meedaaliyaa worqee...
Kallattii lameeniinuu, wolmorkii dhiiraa fi dhalaanis, atleetonni Itoophiyaa maaraatoonii Fraankifart moo’achuudhaan gootummaa isaanii akkuma baratame addunyatti agarsiisaniiru. Wolmorkii fiigicha maaratoonii worra dhiira jiddutti ta’een atleet...
Natsaanat Guddataa, umriin 24, walakkaa maratoonnii Vaaleensiyaa (km 21) injifachuudhan atleetii Itoophiyaa isii jalqabaa taateerti. Natsaannat Guddataa fiigicha sa’aa 1:07:30 kan xumurte. Natsaannat Guddataa fiigicha...
Taphoota Priimer Liigii torbaan kanaan Cheelsiin, Arsenaaliifi kilaboonni magaalaa Manchastar lamaan injifannoo gurguddaan xumuraniiru. Taphini Cheelsiifi Astoon Vilaa jiddutti geggeeffame 2 – 0’n kan raawwate....
Fira - Sep 20, 2015 0
Manchastar Yunaayitid taphicha suuta eegale. Inumaa Saawuzhamtan ture goolii Graaziyaanoo Peeleen galcheen dursa fudhachuu kan danda’e. Ta’us garuu, garee taphattoota ciccimoo kanneen akka Antonii...
Hedduun namaa tasa kana hin eegne. Kanniin xiinxallaa kubbaa miilaa laatanis kuni ni ta'a jedhanii hin tilmaamne. Cheelsiin yeroo dheeraadhaaf injifatee dirree bayuu dagate...
Wolmorkii atleetiksii Diamond League 2015 magaalaa Braasilsitti geggeeffameen Yoomiif Qajeelchaa meetira 5000'n injifannoo guddaa argate. Yoomiif morkattota isaa irratti ol'aantummaa kan argate fiigicha daqiiqaa...
Gootittiin atleetii Oromoo Ganzabee Dibaabaa fiigicha meetira 1500 daqiiqaa 4:08.09 xumuruudhaan haadha meedaaliyaa worqee ta’uu dandetteerti. Ganzabeen morkattoota isii irratti ol’aantummaa kana kan argatte...
Fiigicha meetira 10,000 IAAF World Championship 2015 magaalaa Beejiingitti geggeeffame irraa qooda kan fudhatan atleetota Itoophiyaa sadi turan. Meedaliyaa argachuu kan danda’e garuu Galatee...